April 4, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 4th, 2017'
DAAWO: Qaabkii Wasiirka Cusub ee Gaashaandhiga uu Maanta ula Wareegay Xilka Wasaaradaasi (VIDEO)
April 04, 2017 – Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa Maanta si rasmi ah ula wareegay Xilka Wasaarada Gaashaandhiga, kadib Xaflad maanta lagu qabtay Wasaaradaasi. Munaasabadda Xil Wareejinta ayaa Waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha Ciidanka Xooga Dalka, Masuuliyiin ka tirsan Dowladda, iyo Sarakiil Ciidan oo ajinebi iyo Soomaali …
Xil Wareejintii Wasaaradda G/Dhiga (VIDEO)
Munaasabadda Xil Wareejinta ayaa Waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha Ciidanka Xooga Dalka, Masuuliyiin ka tirsan Dowladda, iyo Sarakiil Ciidan oo ajinebi iyo Soomaali isugu jirta. Wasiirka Cusub ee Wasaarada Gaashaandhiga C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa u mahadceliyay wasiirkii hore ee gaashaandhiga sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga qeyb qaato xureynta degaanada ay …
Ciidamada Dalka Nigeria oo Weerarkii u Danbeeyay ku Qaaday Xarunta Ugu Weyn ee Ururka Boko Haram (VIDEO)
April 04, 2017 – Ciidamada milatariga ee dalka Nigeria ayaa bilaabay howlgalkii ugu dambeeyay oo ay sheegeen inay kusoo afjaraan dagaalka ay kula jiraan kooxda la magacbaxday Boko Haram ee ka dagaalanta waqooyiga dalka Nigeria. Howlgalkan oo loogu magacday Weerarkii ugu dambeeyay ee Boko Haram, ayaa isbuucan ka bilaawday dhulka Keynta ah ee looyaqaano (Sambisa Forest). …
Weerarka Lagu soo Afjarayo Boko Haram (VIDEO)
Howlgalkan oo loogu magacday Weerarkii ugu dambeeyay ee Boko Haram, ayaa isbuucan ka bilaawday dhulka Keynta ah ee looyaqaano (Sambisa Forest). Duulaankan kama danbeysta ah ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweynaha dalkaasi Nigeria Mr. Maxamadu Bohari oo ah nin Muslin ah oo dhawaan la doortay.
Wariye Coldoon oo Lagu Wado in uu Maato Horyimaado Maxkamadda Magaalada Hargeysa
April 04, 2017 – Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa sheegaya in maanta lagu waddo in Maxkamad la horkeeno Wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo muddo bil iyo bar kabadan ku xiran xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa. Wariyeyaasha ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wariye coldoon maanta la horgeyn doono Maxkamada, si …